kafka on the shore Archives - Kavyalaya - काव्यालय
भदौ १३, २०७७0comment
म अनभिज्ञ छु । मलाई थाहा छैन, म के लेख्न गइरहेको छु ? के लेख्न चाहन्छु ? म खोक्रो भएको छु । मभित्र शब्दहरू अचेल आउन मान्दैनन् । मसँग खेल्न…